Vula i-Alumina Body Ceramic nge-Mo / Mn Metallization China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Vula i-Ceramic Component > Vula i-Alumina Body Ceramic nge-Mo / Mn Metallization
Ngesidingo esithile esikhethekile ekusebenziseni okuphezulu okuvaliwe, ukukhishwa kwe-Mo / Mn kuphela kumzimba wesisekelo se-ceramic kukhethwa. Singahlinzeka ngefilimu encane ngezinga elihlukile lokufaka imali. Ingqimba ye-molybdenum ingahlanganiswa emzimbeni we-ceramic ngokuqinile emva kokushisa okukhulu okushisa.
Siyakwazi ukukhiqiza ukuhlukahluka okuhlukahlukene okuvela kusayizi encane kuya kwesisindo esikhulu semishini yokufaka izitsha ze-ceramic. Ngokusekelwe emishini yethu yokukhiqiza ephelele ekubumbeni kwe-metallization nokulinganisa amadivayisi wokuhlola angaphakathi , sinenzuzo enkulu ekulawulweni kwekhwalithi nokubiza. Yingakho senza lula kakhulu ukunikela nge-batch encane kakhulu ngesikhathi esifushane sokuhola.
Sinikeza izinhlobonhlobo zezinye izingxenye zobuchwepheshe be-ceramic ezihlukene, njengokwakhiwa kwesakhiwo se-ceramic jikelele, i-substrate ye-ceramic, izigxobo ze-ceramic, amashubhu e-ceramic, ukugaya okwenziwa nge-ceramic nokunye okunye.
● Amandla aphezulu okubopha / amabhande ● Izinga lokuvuza okuphansi ● Amandla aphezulu okuQinisa
● Amandla aphezulu kagesi ● Ukwanda okushisa okuphansi ● Ukuphikisana nokuqothula ngaphandle kokugqwala